Iyo Yakanakisa Yemahara Slideshow Mugadziri Mapurogiramu (Desktop Software, Nhare Mapurogiramu, uye Mapuratifomu epaIndaneti) | Martech Zone
Yakanaka slideshow inogadzira software inokutendera iwe kukudziridza inonakidza mharidzo kana mavhidhiyo ane akasiyana magadzirirwo maturusi akadai setemplate, kurira, mhedzisiro, mameseji fomati uye maumbirwo, nezvimwe. MPEG, MOV, .AVI kana .MP4, nezvimwewo Saka vanogona kuwanikwa zviri nyore kune mamwe mapuratifomu akadai seApple, iOS kana komputa. Idzi mharidzo dzinogona kukubatsira iwe kuita nhambo dzakakosha senge mazuva ekuberekwa kana michato isingakanganwike, sezvo ivo vachipa nzira yakanakisa yekuratidza kugona kwako. Unogona kuwana zvirinyore kushandisirwa pa internet zvekugadzira masiraidhi uye mune ino chinyorwa, ini ndinonyora gumi nemaviri acho!
Part 1: Wepamusoro 4 Mahara Slideshow Mugadziri Desktop Mapuratifomu
Iyo yakanakisa slideshow maker maturusi akanyorwa pazasi anoenderana software yeWindows uye Mac. Maitiro ekugadzira slideshow ine mafoto akafanana: wedzera mafoto kutanga wobva wawedzera odhiyo / mimhanzi, chengeta kuDVD kana komputa kana kuigovana pasocial media.
Wondershare Filmora haisi yemavhidhiyo edhita asi inokutendera iwe kuti ugadzire masiraidhi, ese evatangi uye nyanzvi. Zvese izvi zvinorerutsa vhidhiyo uye masiraidhi ekuvandudza mabasa paWindows uye Mac. Sechishandiso chinogadzira masiraidhi ane mimhanzi uye shanduko, mafirita, pamusoro, nezvimwe, Filmora inopa zvinopfuura mazana matatu mhedzisiro uye anopfuura makumi maviri emumhanzi ane copyright anokutendera kuti ubudise kugona kwako.
Iyo inotsigira ese akakurumbira mafomati emafaira uye iyo slideshow inogona kugoverwa zvakananga pasocial media mapuratifomu akadai seYouTube, Vimeo, nezvimwe.
Mazhinji maficha anoita kusimudzira mharidzo inoshanda kwazvo.
Intuitive interface ine nyore kushandisa-zvishandiso.
Filmora ine yakavakirwa-mukati odhiyo raibhurari iyo inopa akasiyana emumhanzi masitaera uye maungira emhedzisiro
Iyo ine zvidimbu zvakasiyana zvemimhanzi, mafirita, mafambiro zvinhu, shanduko uye zvakapetana.
Ese akakurumbira mafomati mafaira anotsigirwa.
Nyore kurodha kumagariro enhau.
Wondershare DVD Slideshow Builder chishandiso chinopa mhinduro ine simba kukudziridza maficha-akapfavirira masiraidhi ezvinodiwa zvehunyanzvi. Vashandisi vanogona kusanganisa zviri nyore mavhidhiyo uye mafoto pamwe ne2D kana 3D shanduko mhedzisiro. Vhidhiyo yemhedzisiro inogona kugovaniswa ipapo kuYouTube, iPod kana TV.
Zviri nyore kwazvo kushandisa chishandiso ichi neakafanogadzirirwa maficha.
Iyo inopa yakakura muunganidzwa wemifananidzo, vhidhiyo uye odhiyo mafomati.
Kugadzirisa kunogona kuitwa pane vezvenhau usati waisa iyo yekupedzisira zvisikwa.
Iyo haibvumidze vashandisi kugovana mharidzo kuburikidza neemail kana zvakananga pamaCD anoshanda.
3 Freemake Vhidhiyo Converter
Freemake Vhidhiyo Converter iri software yakanaka yekugadzira masiraidhi anokurumidza. Iyo inoronga yakanakisa yevhidhiyo uye yekuunganidzwa kwemifananidzo nenzira inoshamisa kwazvo yeWindows PC. Kana iwe uchida kubatanidza nhamba hombe yemifananidzo mune yako slideshow, Freemake ndiyo sarudzo yakanakira iwe.
Chaizvoizvo yemahara uye hapana kunyoreswa kunodiwa.
Mazhinji mafomati ekuburitsa mafaira anotsigirwa.
Iyo inokutendera iwe kurodha yako projekiti kuYouTube zvakananga.
Mharidzo dzinogona kuendeswa zvakananga kuDVD.
Iko hakuna matemplate kana matemplate ekutanga nawo.
Unogona chete kushandisa mhedzisiro uye haugone kuwedzera zvinyorwa mumasiraidhi.
Microsoft yeWindows Movie Mugadziri inokutendera iwe kuwedzera yako yaunofarira muunganidzwa wemimhanzi, mavhidhiyo uye mapikicha mune masiraidhi. Mavhidhiyo anogona zvakare kunyorwa zvakananga kubva pawebhu webhu uyezve akabatanidzwa muchirongwa. Zviri nyore kwazvo kushandisa zvinoonekwa uye mifananidzo.
Lightweight uye nyore kushandisa papuratifomu.
Huwandu hukuru hwekushandurwa nemeso ekuona.
Iyo inopa yakananga yemagariro midhiya yekugovana ficha.
Kushomeka mashandiro achienzaniswa nemamwe maturusi anowanikwa pamusika.
Inotsigira mashoma mafomati mafaira.
Chikamu 2: Akanakisa Yemahara Slideshows Online Software
Kune avo vanoda kugadzira mharidzo vasina kudhawunirodha chero software kana kuisa maapplication, isu takawana kanenge 3 MAHARA mapuratifomu epamhepo anotendera iwe kuti udaro.
4. Zvishoma nezvishoma Ratidza
Zvishoma nezvishoma Ratidza inozivikanwa inozivikanwa pasocial media-yakasanganiswa app iyo inobvumidza nyore kugovana yezviri mukati pasocial network. Vashandisi vanogona kuendesa mavhidhiyo kana mifananidzo kubva kumakomputa epamba kana vanogona kuwana midhiya zvakananga kubva pasocial media mapuratifomu pazvinenge zvichidikanwa.
Inogona kuita zvinhu zvakawanda kupfuura kungogadzira mharidzo dziri nyore.
Iyo ine yakawanda munharaunda-yakavakirwa kugovana maficha
Vashandisi vanogona kuendesa midhiya mafaera kubva kwakasiyana enhau enhau
Mavhidhiyo anogona kumisikidzwa seakavanzika kana pachena.
Iyo inopa akawanda zvingasarudzika sarudzo dzekuchinja kwemifananidzo uye nekumhanya.
Hazvisi nyore kushandisa.
Mavhidhiyo akavandudzwa haagoni kutorwa pasi.
FlexClip ndeye 100% yemahara asi ichiri kupa akasiyana siyana maficha kune vese vashandisi. Hapana kurodha pasi kunodiwa, sezvo inoshanda online nezvose zvakavakirwa-mukati slideshow maturusi ekuvandudza. Vashandisi vanogona kuwedzera mavhidhiyo kana mimhanzi papuratifomu uye mafaera anogona kugovaniswa gare gare nemapuratifomu enhau.
Kizoa ndeimwe inozivikanwa online vhidhiyo mupepeti iyo inobvumidza nyore kuwana kune anoshamisa maficha pasina kunyoreswa. Iyo yekumberi mupepeti inotsigira mifananidzo, shanduko, uye mhedzisiro uye inopa akawanda emimhanzi sarudzo yekuvandudza yekudyidzana mavhidhiyo. Vashandisi vanogona nyore nyore kugadzirisa iyo nhoroondo yenguva, nguva, saizi kana nzvimbo, nezvimwe, zvichidikanwa.
Chikamu 3: Akanakisa emahara slideshow maapplication eApple
Vanhu vanoda kugadzira slideshow ine Android smartphone, vanogona kudhawunirodha anotevera emahara masiraidhi ekugadzira maapp.
1. Photo Nyaya
Mufananidzo Nyaya inogona kukudziridza mharidzo huru uye mafirimu zviri nyore mumatanho matatu. Vashandisi vanongoda kusarudza mapikicha kubva kumidziyo yavo, gadzira slideshow ine inodiwa shanduko uye madingindira, uye pakupedzisira chengetedza kana kugovera zvinoenderana nekuravira kwavo.
Kune akawanda mafirita, maficha uye zvinyorwa zvidiki.
Iyo inopa yakakwira-resolution mhinduro.
Iyo yekumhanyisa kumhanya inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
Iyo chete yakaganhurirwa nhamba yemifananidzo inogona kusarudzwa.
2. PIXGRAM - vhidhiyo pikicha slideshow
Pixgram chishandiso chakareruka, chakareruka uye chakanakisa icho chinogona kuunganidza nyore nyore mafoto ese pamwechete kuti vagadzire slideshow ine inonakidza kumashure mhedzisiro. Pane zvakawanda zvakajairika maficha ekugadzirisa maitiro kune ako kuravira.
Kugoverana zviri nyore pasocial media mapuratifomu.
Zviri nyore kushandisa nemazhinji maficha.
Iyo inopa yakakosha yekugadzirisa maficha uye mhedzisiro.
FilmoraGO application mbozhanhare iyo inopa yakasarudzika mushandisi ruzivo neiri nyore kushandisa interface. Zviri nyore kwazvo kucheka mavhidhiyo uye iwe unogona zvakare kuisa mafirita akasiyana pane izvo zvirimo nemazhinji akagadzirira-akagadzirwa madingindira. FilmoraGo yakagamuchira kutariswa kwakanyanya kubva kunharaunda yevashandisi nekuda kwehunyanzvi hwekumisikidza uye maturusi ekuvandudza.
Iyo inopa muunganidzwa wakakura wematimu.
Iyo ine yakawanda inotonhorera mhedzisiro senge yekudzosera kumashure, inononoka kufamba uye nekukurumidza kufamba, nezvimwe.
Dzimwe nguva zvinononoka nemafaira makuru.
Chikamu 4: Yakanakisa Yemahara Slideshow Mugadziri Mapurogiramu eIOS
Kunze kwekushandisa Apple iMovie kugadzira slideshows pane yako iPhone, unogona zvakare kuyedza anotevera emahara maapplication kugadzira masiraidhi pane iOS zvishandiso.
Ivo avo vanoda app kuti vagadzire mharidzo neine hupfumi uye intuitive maficha pane yavo iPhone vanowana iyo Slide Lab kunyorera kunonakidza. Zviri nyore kwazvo kugadzirisa mifananidzo, mimhanzi uye mavhidhiyo uchishandisa chishandiso ichi. Uyezve, masiraidhi ehurefu chero anogona kugadzirwa nyore.
SlideLab chishandiso chemberi, chine simba uye chinonakidza chekugadzira masiraidhi anogona kushandiswa kune zvehunyanzvi uye zvemunhu zvinodiwa.
Zvakanaka uye zviri nyore kushandisa application.
Zviri nyore kwazvo kuwedzera zvinonakidza mhedzisiro.
Izvo zvakati omei kuronga mapikicha sezvaidikanwa.
Ichi chishandiso chinobvumidza vashandisi kusanganisa mapikicha kuva mafuremu, aine customizable chimiro reshiyo, saizi uye ruvara, nezvimwe. Inoenda nhanho imwe kumberi nemasefa epamberi ekugadzira iwo anowirirana masiraidhi anokwanisa kugadzirwa nyore.
PicPlayPost inobvumira vashandisi kusarudza zvipo, mavhidhiyo uye mapikicha, nezvimwe.
Iyo inopa yakapusa vhidhiyo yekubatanidza basa rehurukuro.
Sequential uye panguva imwe chete kutamba kunogona kugadzirwa pamwe nezvakawanda zvakasarudzika maficha.
Iyo inobvumira vashandisi kufunga kunze kwebhokisi pamwe nekurongedzwa kweakawanda mavhidhiyo maseti.
Izvo hazvipe chero iCloud-based rutsigiro rwekuchinjisa kana kuchengetedza zvemukati pakati pezvinhu zvakasiyana.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa chatingaite pakombuta kugadzira foto yemifananidzo, uko iyo mifananidzo inopuruzira imwe mushure meimwe ichienderera uye otomatiki. Isu takuratidzira iwe akanakisa mawebhusaiti kuti ugadzire mapikicha masiraidhi uye mifananidzo kuti uone paInternet, pasina chikonzero chekushandisa zvirongwa. Inguva yekuti iwe utore yako yaunofarira uye utange!
Tags: desktop slideshow softwarefilmoragogadzikzvemahara zokusebenzayemahara slideshow inogadzirafree softwarefreemake vhidhiyo inoshandurakizoaMicrosoftnharembozha slideshow apponline online slideshow mapuratifomufoto slideshownyaya yemufananidzomifananidzopicplaypostpixgrammusarazvishoma nezvishomazvishoma nezvishoma kuratidzaSlideshowslideshow maapplicationslideshow mapuratifomuvideo editingWondershare dvd inotsvedza muvakiwonderhare filmora
Jun 13, 2021 pa9: 03AM
Sammy ndinokutendai nechinyorwa chenyu, muri munyori akanaka ndinofarira chinyorwa chenyu, uye ndinoshandisa SlideLab app izvi zvinonakidza, ndiri kushandisawo Vimory app kugadzira vhidhiyo yemasiraidhi (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Iyi Anwendung iri nyore kushandisa, yakakura UI / UX uye ine yakawanda maficha